रुघाखोकीलाई सामान्य सोच्दा ज्यानै जाला, भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न डा. रवीन्द्र समिरको सुझाव
काठमाडौं,१७ असार– मौसम परिवर्तनको समयमा भाइरल इन्फ्लुएन्जाको कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको भन्दै रुघाखोकी र ज्वरोलाई सामान्य रुपमा नलिन चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा भाइरल इन्फ्लुएन्जाका विरामी बढ्न थालेकाले आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सजक रहन जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रवीन्द्र समिरले सुझाव दिएका छन् । डा. रविन्द्र समिरका अनुसार भाइरल इन्फ्लुएन्जा भनेको भाइरसको संक्रमणको कारण लाग्ने रुघा हो ।
यी हुन् भाइरल इन्फ्लुएन्जाको लक्षण
जाडो हुने, काम्ने ।
खोकी लाग्ने ।
सास फेर्न गाह्रो हुने,स्वर बस्ने ।
सिंगान आइरहने ।
छाती तथा घांटी दुख्ने ।
शरीरमा घमौरा आउने ।
वान्ता हुने, रिंगटा लाग्ने ।
सम्पूर्ण शरीर दुख्ने, थकित हुने ।
ज्वरोको औषधि खाएपनि लामो समय निको नहुने ।
भाइरल इन्फ्लुएन्जाका बालबालिकाहरुमा छिटोछिटो सास बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छालाको रंग निलोनिलो देखिने, पानी तथा झोलिलो खाना नखाने, सुतिरहने, बिमिरा सहितको ज्वरो आउने, रुघा र खोकीले ग्रस्त बनाउने डा. रवीन्द्र समिरको भनाइ छ । यस्ता लक्षण सामान्य वा मौसमी रुघामा, छाती वा घाँटीको संक्रमणमा, टाइफाइड तथा निमोनियामा पनि देखिने भएकोले अभिभावक तथा चिकित्सक पनि झुक्किने सम्भावना हुनसक्ने उनले बताए । भाइरल इन्फ्लुएन्जाको कारण दिर्घ रोगका विरामीलाई छिटो संक्रमण हुने उनले बताए ।
यस्ता रोगका विरामीलाई बढि जोखिम
छातीको इन्फेक्सन भइरहने व्यक्ति
मृगौला तथा क्यान्सरका बिरामी
बालबालिका, बृद्धबृद्धा, स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती महिलालाई बढि जोखिम हुन्छ ।
भाइरल इन्फ्लुएन्जामा एन्टिबायोटिकले सेकेण्डरी इन्फेक्सन रोक्ने बाहेक निको गर्न सक्दैन । ज्वरो, खोकी लगायतको लाक्षणिक उपचार गर्ने, घरमै आराम गर्ने, प्रशस्त झोलिलो एबम पोषिलो खानेकुरा खाने तथा गाह्रो भएमा अस्पताल जाने जस्ता उपचारका प्रक्रिया हुन्छन । एन्टी भाइरस औषधि सबैलाई प्रभावकारी हुँदैनन् । भाइरल इन्फ्लुएन्जा ठिक नभएर निमोनिया लगायत कम्प्लिकेसन भएमा सन्चो हुन गाह्रो हुने उनले बताए ।
भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न यस्ता छन् डा. रवीन्द्र समिरका सुझाव
महिनाभन्दा माथिका उमेरका सबैले इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन अनिबार्य रुपमा लगाउनुपर्छ । यो खोप निकै प्रभावकारी छ ।
रुघाखोकी लागेको व्यक्तिलाई घरमा छुट्टै कोठामा राख्ने, उसले प्रयोग गरेका सामान प्रयोग नगर्ने तथा नजिकबाट संसर्ग गर्नुहुँदैन ।
रुघाखोकी लागेको व्यक्तिसंग दुरी राख्ने, राम्रो खालको मास्क लगाएर कुरा गर्ने गर्नुपर्दछ ।
बिद्यालय, अस्पताल, सिनेमा घर, सार्वजनिक बस, सपिंग मल, स्विमिंग पुल आदिबाट एकार्कामा रोग चांडो फैलिने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ भिडभाडमा जानु हुँदैन ।
साबुनपानीले वा स्यानिटाइजरले राम्रोसंग हात सफा गरेर मात्र खाना खाने गर्नुपर्दछ ।
मुख, नाक तथा आँखामा हात सफा नगरी छुनुहुंदैन ।
रुघाखोकी लागेको बेला रक्सी खानुहुँदैन ।
आफुले काम गर्ने अर्थात हातले छुने ठाउँलाई सफा गर्नुपर्दछ ।
बाटोमा हिंड्दा वा भिडमा जाँदा मास्क लगाउनुपर्दछ ।
बिरामी हुँदा घरमा आराम गर्ने, प्रशस्त झोलिलो तथा पोषिलो खाने कुरा खानुपर्दछ ।
रुघाखोकी तथा ज्वरो आउने बित्तिकै आफ्नो चिकित्सकसंग परामर्श गर्ने, दिएको औषधि नियमित सेवन गर्ने तथा अपेक्षित सुधार नभए तुरुन्त अस्पताल जानुपर्दछ ।
संविधानले सबै जनतालाई एक ठाउँमा जोडेको छ : कोइराला विराटनगर- नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले नेपालको संविधानले सबै जाति र धर्मका जनतालाई एक ठाउँमा जोडेको बताएका छन् । कौमी एकता मञ्च विराटनगर नेपालद्वारा आज...
सोनाक्षीले यसरी घटाउँछिन् तौल, सार्वजनिक गरिन् यस्तो तस्बिर
यसरी कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परे देउवा (२ तस्बिर)
परराष्ट्रमन्त्री जापान प्रस्थान, को-को छन् सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा ?
हिटरबाट आगलागी हुँदा आमासहित चार बच्चाको मृत्यु
मोदी एकाएक किन पुगे माल्दिभ्स ?